XOG XASAASI AH: Farmaajo oo Qadar ka helay 1.1 Million, joojinta saldhiga Militari UAE ee Ber bera oo V/Somalia laga qorsheeyay & Meydka wariye Khashogi oo.. – War La Helaa Talo La Helaa
XOG XASAASI AH: Farmaajo oo Qadar ka helay 1.1 Million, joojinta saldhiga Militari UAE ee Ber bera oo V/Somalia laga qorsheeyay & Meydka wariye Khashogi oo..
Qaar ka mid ah warbaahinta Khaliijka ayaa daabacay in Dowladda qadar bixisay lacag dhan $1.1 Million oo dollar si loo joojiyo dhismaha saldhiga Militari uu imaaraadka Carabta ka dhisanayo magaalada Ber bera ee Somaliland.
Sida warbixintu ay sheegeyso lacagtaan ayaa la siiyay Dowladda Federaalka Soomaaliya oo loo soo marsiiyay Fahad Yaasiin oo ah taliye ku-xigeenka Hay’adda NISA & isku xiraha Villa Soomaaliya iyo Xukuumadda Doha.
Ku dhowaad 44/% lacagtan $1.1 Million ee Qadar ay siisay Dowladda Soomaaliya ayaa loogu talagalay in lagu bixiyo hannaan sahlaya in si dhaqsi ah loo joojiyo loona bur buriyo Heshiiska dhexmaray Maamulka Somaliland ee ku aadan dhismaha saldhiga Ber bera iyo waliba mashaariicda ay Shirkadda DP World ay ka wato Dekadda magaalada Ber bera.
Sidoo kale,warar kale oo la helayo ayaa sheegaya in qadar ay saxiixday Heshiis kale oo ku kacaya &500-Million oo loogu talagalay in lagu caawiyo Hay’adaha arrimaha bini-adanimada ee Somaliland si loogu adeego shacabka dhibaateysan ee ku dhaqan Somaliland gaar ahaan Gobolka Saaxil.
Waxaa sii xoogeysanaya cadaawada ka dhaxeysa dalalka imaaraadka Carabta iyo qadar,taasi oo salka ku heyso khilaafkii Khaliijka iyo waliba dano siyaasadeed oo is diidan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Xukuumadda Doha ayaa hadda waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan,waxayna taageero dhinacyo badan ah siisaa Hay’adaha kala duwan ee Soomaaliya.
Wararkii ugu danbeeyay Qarax Sarkaal ku dhintay oo goordhow ka dhacay Muqdisho